လူပျိုကြီး အပျိုကြီး ဖြစ်မဲ့သူ.. အချစ်မရှိသော နေ့ရက်ပိုင်ရှင်များရဲ့ လက္ခဏာများ….!
Thet Naing Swe (24/03/50313)
ဘ၀ဆိုတာကြီးက အတော်ကို ပျင်းရိငြီးငွေ့စရာ ကောင်းလှပါတယ်ဗျာ။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်ရဲ့ အကြောင်းကို မပြောချင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်နာမည်က လှမောင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ လူတွေက ကျွန်တော်ကို လှမောင်လို့ ဘယ်သူမှ မခေါ်ကြပါဘူး။ ဇီဇာမောင်လို့ ခေါ်ကြတယ်။ ဇီဇာကြောင်လွန်းလို့ လှမောင်ဆိုတဲ ့နာမည်ပျောက် ဇီဇာမောင်ဆိုတဲ့နာမည်ရောက်ခဲ့တာသာ ကြည့်ပေတော့။ ကျွန်တော်ရဲ့အသက်က အခုဆို လေးဆယ်တောင်၀င်ပါပြီ။ အိမ်ထောင်မရှိသေးတဲ့ လူပျိုကြီး တစ်ယောက်ပါ။ အိမ်ထောင်မရှိသေးဘူး ဆိုတော့ အိမ်ထောင်ရေးတွေကို စိတ်မ၀င်စားဘူးလို့ မထင်စေချင်ပါဘူး။ အရမ်း စိတ်၀င်စားပါတယ်။
ကျွန်တော်ဟာ အသက်၁၈-နှစ်သား လောက်ကတည်းက အိမ် ထောင် ပြုချင်ခဲ့တာပါ။ အိမ်ထောင် ဖက်တွေ့ရဖို့ အတွက်လည်း အမြဲတမ်း ကြိုးစား ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ ချစ်သူ ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မေးစရာ ရှိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ အိမ် ထောင်မကျ သေးတာလဲပေါ့။ အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံရရင် ကျွန်တော်ရဲ့ ဇီဇာကြောင်လွန်းတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ပဲ ဆိုတာ သိပါတယ်။
ကျွန်တော်ရဲ့ ဘ၀မှာ ချစ်သူရီးစား တော်တော်များများ ထားခဲ့ဘူးပါတယ်။ မျက်နှာများတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့ဗျာ ။ ကျွန်တော်က အပျော်ကြံတာ မဟုတ်ရပါဘူး။ အတည်ကြံတာပါ။ ကျွန်တော်က ချစ်သူမထားခင် ကတည်းက လက်ထပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီးမှ ထားတာမို့ပါ။ ဘယ်တစ်ယောက်ကိုမှ အပျော်ကြံတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။
နောက် ကျွန်တော်မှာ အမုန်ဆုံးဆိုတဲ့ အရာတွေ တော်တော်များပါတယ်။ ဒါလဲ မကောင်းပါဘူး။ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ညစ်ပတ်ရင် အရမ်းမုန်းပါတယ်။ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမှု့ အားနည်းတာကို ပြောတာပါ။ ကျွန်တော်ရဲ့ ချစ်သူလေးကို လက်မထပ်နိုင်ခဲ့တာ အဲဒါကြောင့်ပါ။ သူက အရမ်း ညစ်ပတ်ပါတယ်။
အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်ရဲ့ အသက်၂၀ပဲ ရှိသေးတယ်။ သူနဲ့ ကျွန်တော်က သက်တူရွယ်တူပါ။ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေပါပဲ။ မူလတန်းကျောင်းကနေ အထက်တန်း အောင်တော့လဲ အတူတူ။ နောက် အေ၀းသင် သွားတက်ပြီး ဘွဲ့ရတဲ့အထိ အတူတူပါ။ သူနဲ့ ကျွန်တော် ၁၀-တန်းစာမေးပွဲ ဂေဇက်ထွက်တဲ့နေ့မှာ ချစ်သူဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ချစ်သူတွေ ဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်း သူ့အကြောင်းတွေကို ကျွန်တော် တော်တော်မျာများ သိခဲ့ရတယ်။
သူက အာပုတ်နံ့လည်း အတော် နံပါတယ်။ သူနဲ့ စကားပြောရင် အေ၀းကနေပဲ ပြောရပါတယ်။ အနီးကပ်ပြောရင် သူရဲ့ အာပုတ်နံ့ကို ကျွန်တော် လုံး၀ မခံနိုင်ပါဘူး။ မရိုသေ စကားပြောရရင် ချစ်သူတို့ သဘာ၀ သူရဲ့ နုတ်ခမ်းလေးက ချိုမြိန်တဲပ အနမ်းလေးတစ်ခုကို ကျွန်တော် ရယူဖို့ မကြိုးစားခဲ့ပါဘူး။ အဓိကကတော့ သူရဲ့ အာပုတ်နံ့ကို မခံနိုင်လို့ပါ။ အဲဒီလိုနဲ့ သူ့ကို ကျွန်တော် ရင်နာနာနဲ့ပဲ လမ်းခွဲခဲ့ရတာပါ။
နောက်တစ်ယောက် ကျတော့ အရမ်း လိမ်တတ်လို့ပါ။ သူက လိမ်စရာမရှိရင် ကိုယ့်ပေါင်ကို ပြန်လိမ်ရမှ ကျေနပ်တဲ့ လူစားမျိုးပေါ့ဗျာ။ သူနဲ့ ကျွန်တော် ချစ်သူသက်တန်း တစ်လျှောက်လုံးမှာလည်း သူ့ရဲ အလိမ်အညာတွေကို လူးလိမ့်နေအောင် ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဘယ်လောက်ထိတောင် လိမ်တတ်သလဲဆိုရင် သူနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ အကုန်လုံး အလိမ်အညာတွေ ချဉ်းပါပဲ။
တစ်ခုမှ အမှန်အကန် မပါပါဘူး။ သူ့ရဲ့ မောင်တစ်၀မ်းကွဲကို ခေါ်လာပြီး ရီးစားဟောင်ပါဆိုပြီး မိတ်ဆက်ပေးလို့ အတော်ခံစားခဲ့ရသလို ရီးစားဟောင်း တစ်ယောက်ကို ခေါ်လာပြီး သူ့ရဲ့ မောင်တစ်၀မ်းကွဲပါလို့ ပြောလို့ အတော်ပဲ စိတ်ကသိကအောက် ဖြစ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် လိမ်တတ်တဲ့ မိန်းမကို ကျွန်တော် ကျောခိုင်းခဲ့ရပါတယ်။
နောက်တစ်ယောက်ကျတော့ ရိုးလွန်းအား ကြီးလို့ပါ။
နောက်တစ်ယောက်ကြတော့ စွာလို့ ရန်အမြဲလိုနေလို့ ………..
နောက်တစ်ယောက်ကြတော့ ကျွန်တော်လိုပဲ ဇီဇာကြောင်လို့……….
အဲဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ အသက်တွေလည်း တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ် ကြီးလာခဲ့ပါပြီ… ကျွန်တော် ငယ်ငယ်တုန်းက ထဲကသာ ဇီဇာမကြောင်ခဲ့ဘူး ဆိုရင် အခုလောက်ဆို ကျွန်တော်မှာ မိသားစုနဲ့ ဖြစ်နေလောက်ပါပြီ။ အခုတော့ ကျွန်တော် ဇီဇာကြောင် လွန်းအားကြီးခဲ့လို့ အခုတော့ ဘ၀မှာ အထီးကျန်ဆန်စွာနဲ့ တစ်ယောက်ထဲ ဖြတ်သန်းနေခဲ့ရပါတယ်။
အခုတော့လည်း ထိုင်းနိုငံမှာ အလုပ်လာလုပ်နေပါတယ်။ အခုအချိန်အထိ လှမောင်ဆိုတဲ့ လူသားတစ်ဦးဟာ လုံး၀ ဇီဇာမကြောင်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်၊အိမ်ထောင်မကျသေးဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို ခင်ဗျားတို့ နီးစပ်ရာကို ပြောပြပေးပါဦးဗျာ……….
အဲဒီကိုလှမောင်ကြီးက ကျွန်တော်ရဲ့ ဗေဒင်လက္ခဏာ ဟောခန်လေးအတွင်းကို ရောက်လာပြီး သူ့အကြောင်းတွေကို ပြောပြသွားခဲ့တာ။ ကျွန်တော်က သူ့လက္ခဏာကို ကြည့်လိုက်တော့ …တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ခုံရဲ့ အောက်တည့်တည့်မှာ နှလုံးလမ်းကြောင်းမှာ ကျွန်းခံနေတာ သွားတွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီလို လက္ခဏာ ပိုင်ရှင်တွေဟာ အချစ်ရေးမှာ ဇီဇာကြောင်လွန်းလို့ ချစ်ရမဲ့သူ ၊ ချစ်တဲ့သူ ၊ ချစ်သင့်သူ ၊ချစ်နိုင်တဲ့သူ ဘယ်လို ချစ်သူမျိုးကိုပဲ တွေ့တွေ့ သူ့ရဲ့ ဇီဇာကြောင်လွန်းတဲ့ စိတ်ကြောင့် အချစ်နဲ့ ေ၀းကွာတတ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ တစ်ယောက်ထဲ အပျိုကြီး ၊ လူပျိုကြီး ဘ၀နဲ့ အရိုးထုပ်သွားရပါတယ်။
လက္ခဏာနှင့် ပါတ်သက်သော ဗဟုသုတများ ရရှိနိုင်ကြပါစေ…
Credit: Hein Tint Zaw
ဆေးကုသမှုခံယူနေရတဲ့ မေတ္တာကို သွားရောက်အားပေးပြီး တွေ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့ ချိုပြုံးနဲ့ ဗေလုဝ
(၁၅) မိနစ် တရားထိုင်နည်း
အမျိုးသမီးသုတေသီတစ်ဦး အရှင်လတ်လတ် မိကျောင်းစားခံရ
ချက်ထားတဲ့ဟင်းကို ပေါ့တယ်ပြောလို့ ခင်ပွန်းကို ဓားနဲ့မသေမချင်း ထိုးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး
မိဘဂုဏ် (၁၃) ပါး
ပိုက်ဆံ ပိုမိုစုဆောင်းဖြစ်စေဖို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်းများ